China grinding roller mpanamboatra sy mpamatsy | BBMG
Fitsipika ara-materialy GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, ISO
Fanodinana fitaovana Forging, fanariana, famaohana
Fitsaboana hafanana Fametahana, fanamafisana, Q&T, fanamafisana ny induction
Fandeferana amin'ny milina Max. 0.01mm
Famaritana ny masinina Max. Ra 0.4
Module an'ny Gear 8-60
Fahamarinan'ny nify Max. ISO Kilasy 5
Weight / Unit 100kgs - 60 000kgs
Application Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, simenitra, fananganana, simika, fitrandrahana solika, vy fikosoham-bary, fikosoham-bary ary angovo
Manaraka: Mitrandraka mitsivalana
Ny fikosoham-bary simenitra dia ireo fitaovana hampiasana akora simenitra. Toy izao manaraka izao ny fitsipika miasa: ny akora dia ampidirina ao amin'ny fantsom-pahalalana amin'ny alàlan'ny valizy hidin-drivotra telo misesy, ary ny fantson-tsakafo dia mipaka any amin'ny faritry ny fikosoham-bary amin'ny alàlan'ny sisin'ny fisarahana. Ny fitaovana dia mianjera eo afovoan'ny fikosoham-bary noho ny fiantraikan'ny hery misintona sy ny rivotra. Ny kapila fikosoham-bary dia mifamatotra mafy amin'ny reducer ary mihodina amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka. Ny hafainganam-pandehan'ny fitsikiana ...
JGM2-113 fikosoham-bary no fanodinam-bato karazana haingam-pandeha. Ny ampahany manapotipotika dia misy peratra mihodina sy roera fitotoana miisa 3 izay mihodina manaraka ny peratra fitotoana, ary raikitra ny roulant ary afaka mihodina amin'ny axis-ny ny tsirairay. Ny arina manta azo potipotika dia mianjera amin'ny peratra fitotoan'ny fantsona afovoan'ny arintany ary ny peratra fitotoana miodina dia manosika ny arina an-dambolambo mankamin'ny lalan'ny peratra fitotoana miaraka amin'ny hery afovoany. horonan-taratasy ...
Ny milina fanontam-pirinty dia fitaovana fitotoana vaovao novolavolaina tamin'ny tapaky ny taona 1980. Ny teknolojia fanodinana sy fikosoham-bary izay misy azy io dia misy vokany miavaka amin'ny fitsitsiana angovo, ary nahasarika ny sain'ny indostrian'ny simenitra iraisam-pirenena. Nanjary teknolojia vaovao amin'ny fampivoarana ny teknolojia fitotoana. Ny masinina dia mandray ny fitsipiky ny fihenan'ny angovo ambany amin'ny fantsom-pitaovana avo lenta ary mampiasa ny fomba fiasan'ny sombin-javatra tokana cru ...
Ny fikosoham-bary mitsangana dia karazana milina fanodinam-bidy izay misy roera 4. Ny fikosoham-bary, ny sandan'ny rocker, ny rafitra fanohanana ary ny rafitra hydraulic dia mandrafitra ny tarika herinaratra fitotoana, izay mizara ho vondrona 4 ary nalamina manodidina ny kapila fitotoana. Amin'ny fomba fijery ara-teknika sy ara-toekarena, ny fikosoham-bary mitsangana dia fitaovana fikosoham-bary mandroso tokoa, raha ampitahaina amin'ny fitaovana fitotoana nentim-paharazana dia manana ireto tombony manaraka ireto: ―Afaka ampiasaina amin'ny fikolokoloana fitaovana isan-karazany ...